भिटेनको भन्दा अश्लिल सामग्री चाँहि युट्युबमा मज्जाले चल्ने ! – ईमेची डटकम
Posted byईमेची डेक्स October 25, 2019 December 10, 2019 Leaveacomment on भिटेनको भन्दा अश्लिल सामग्री चाँहि युट्युबमा मज्जाले चल्ने !
अश्लिलताको पक्षमा कदापी वकालत गर्दैनौं, ढुक्क हुनुस् । तर, सरकारले कलाकार छान्दै, गीत छान्दै नियन्त्रणमा लिएर युट्युवबाट डिलिट गर्न लगाउने हो भने, दैनिक कम्तीमा पनि १ जना समातिन्छन् । नीति चाँहि के हो ? त्यो पो थाहा हुनुप-यो ।
भिटेनको भन्दा अश्लिल सामग्री चाँहि युट्युबमा मज्जाले चल्ने ! विदेशीको अश्लिलता मजाले हेर्न पाइने खुल्लम खुल्ला ! अनि भिटेनलाई मात्रै नियन्त्रणमा लिएर गीत डिलिट गर्न लगाउने कुरा त अलि मिलेन नि ! पोर्नसाइट नेपालमा व्यान्ड भयो भनेर सञ्चारमन्त्री ज्यूले घोषणा गर्नुभयो ।
कहाँ बन्द भयो मन्त्रीज्यू ? बोलिदिए हुन्छ । नीति चाँहिदैन ? होमवर्क गर्नु पर्दैन ? तपाईलाई भिटेनको अफिसियल एकाउन्टबाट त्यो गीत हटाउनु परेको कि पूरै इन्टरनेटबाट हटाउनु परेको ? यो गीत व्यान्ड हो कि भिटेनको युट्युब च्यानलमा मात्रै व्याण्ड हो ?
अश्लिलताको मापदण्ड युट्युबले त स्पष्ट तोकेको छ । हाम्रो सरकारको मापदण्ड चाँहि के ? कुनै पनि अश्लिलले सामग्री वा अनुपयुक्त सामग्री युट्युबले राख्न दिदैन । दिएपनि उजुरीका आधारमा हटाउँछ ।
उसको नीति स्पष्ट छ, हाम्रो नीति के ? नेपाली -यापरले गाँजा खाएको, वियर पिएको सामग्री मात्रै हटाउने कि गाँजा–रक्सी पिएको दृश्य भएको कुनै पनि सामग्री नेपालमा व्यान्ड गर्ने ?
स्नुपडगको गीत ओके, तर भिटेनको नट ओके ? हटाउने भए सबै अश्लिल गीत हटाउ, अश्लिल शब्द भएका दुई अर्थी भाव भएका गीत, सिनेमा, अन्तरवार्ता, सबका सब हटाउनुपर्छ । परिवारसँगै बसेर हेर्न नसकिने सामग्री युट्यबमा छ्यापछ्याप्ती छन् ।
अनि परिवारसँगै बसेर सबै कुरा चाँहि किन हेर्नुप-यो ? -याप म्युजिक अण्डरग्राउण्ड म्युजिक सपरिवार बसेर भजन सुने जसरी सुन्ने खालका हुँदैनन् । अनि यो कुरा परिवार–परिवारमा भर पर्ने कुरा हो । म मेरो परिवारसँग बसेर पोइला जान पाम भन्ने गीत सुन्न सक्दिन ।
म मात्र के, धेरैले सुन्न सक्दैनन् । सरकार यो गीट युट्युबबाट हटाइ पाउँ ! सिनेमामा ट्वीँक ट्वीँक गरेर डाइलग राखिएको हुन्छ । सपरिवार बसेर हेर्न नसकिने सिनेमा बनाउनी, सरकारलाई हेप्नी भन्नु होला । त्यसका लागि एडल्ट रेटिङ दिनुपर्ने हुन्छ । एडल्ट सामग्री एडल्टहरुले हेर्छन्, अरुले हेर्न पाउँदैनन् ।
डिस्ग्ल्यामर चाँहि अनिवार्य राख्नुपर्छ । यति बुद्धि पनि नभएकाहरुबाट घेरिएका छन् नीति निर्माताहरु । वीपी कोइरालाको प्रशिद्ध उपन्यास सुम्निमा सपरिवार बसेर वाचन गर्न सकिन्छ ? के अब मरेका वीपीलाई थुन्नी ? सरकारलाई हेप्नी ? सुम्निमाको विक्री बन्द गर्ने ? शब्द चयनका आधारमा गीत व्याण्ड गर्ने भए मनपरी बोलिएका अंग्रेजी, हिन्दी गीत चाँही किन व्याण्ड नगर्ने ?
अश्लिलताको विरुद्ध उभिनुपर्छ, अश्लिलता भएका सामग्रीको आलोचना गर्न सकिन्छ । हामीले पनि युट्युबमा भएको विकृतीको विरुद्ध बोलेका छौं, तर सरकारले निर्णय गर्दा स्पष्ट नीति र स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्छ । म त चाहन्छु मेरो देशको सरकारले त्यस्तो क्षमता राखोस् कि फोहोरी गीत यो देशमा बन्दैन र बज्दैन भनोस् ।
सरकारलाई अनि पो वाह भनिन्छ ! नेपालीले गाएको फोहोरी गीत मात्र बज्दैन, तर विदेशीले गाएको त्यो भन्दो फोहोरी गीत चाँही बजे बजोस्, नबजे नबजोस् ! ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ भन्ने पाराको यो कारवाही सही र गलत भन्दा पनि सेन्सलेस र मिनिङलेस छ ।
फेरि एक पटक भन्न चाहन्छु, अश्लिलताको पक्षमा हामी छैनौं । नेपालमा एडल्ट सामग्री बन्द गर्ने नीति हो, भने सबै सिनमा, गीत, भिडियोलाई एकै नजरले हेर्नुप-यो । अन्यथा अपाच्य दृष्य, अश्लिल शब्द भएको सामग्रीमा १८ बर्ष भन्दा माथिकाले मात्र हेर्न मिल्ने सूचना चाँहि अनिवार्य हुनुपर्छ ।
भिटेन लगायतका ¥यापर साथीहरुलाई सानो सुझाव, नेपाली समाज पश्चिमी समाज जस्तो अत्याधुनिक छैन, र होइन । त्यसैले सिर्जना गर्ने कलाकारहरुलाई थोरै जिम्मेवार भई र सचेत भएर अघि बढे फ्यान फलोअर्स घट्दैनन्, बढ्छन् । बाँकी हामी सबै ‘यस्तै त हो नि ब्रो ।’